"Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky." - Asa. 27:22.
Velona tao amin'ny tokantranon'ny tantsaha i Jesôsy, ary nanao ny anjarany tamim-pahatokiana sy tamim-pifaliana Izy teo amin'ny fitondrana ny enta-mavesatra tao amin'ny ankohonana (...) Fahamiramiranana sy fahaizana mifandray amin'ny hafa no nentin'i Jesôsy teo amin'ny asany. Mitaky faharetana sy toetra ara-panahy betsaka ny mampiditra ny fivavahan'ny Baiboly ao amin'ny fiainan'ny tokantrano sy ao amin'ny toeram-piasana, ny manaraka ny fizotry ny asa aman-draharaha eo amin'izao tontolo izao nefa tsy hijery afa-tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Eo amin'izany toerana izany no miseho ny maha-mpanampy antsika an'i Kristy. Tsy ho feno ny ahiahin'izao tontolo izao na oviana na oviana Izy ka tsy nanam-potoana hieritreretana momba ny zavatry ny lanitra. Matetika no naneho ny hafalian'ny fony Izy tamin'ny fanaovany hira Salamo sy hiran'ny Ianitra. Nandre ny feony nisandratra nidera sy nisaotra an'Andriamanitra ny mponina tao Nazareta. Niray tamin'ny Ianitra tamin'ny alalan'ny hira Izy; ary raha nitaraina ny namany noho ny fahavizanany amin'ny asa dia nanome fifaliana azy ireo ny feon-kira mamy nipololotra avy tamin'ny molony. Toa nandroaka ny anjely ratsy ny fiderana nasandrany ary hanitra mani-pofona tahaka ny emboka no nanenika izany toerana izany — IFM, tt. 60,61.
Aoka tsy haneho endrika kivy na sorisorena rehefa misy asa asaina ataonao fa raiso amin'ny fo falifaly ny enta-mavesatra madinidinika (...) Tsy inona izy ireny fa, andrakitra tsotra sy mahazatra ary efa fanao andavanandro ka mety ho bitika sy tsy dia manao ahoana loatra ny fahitanao azy. Tsy maintsy tanterahina anefa izy ireny. Raha sahaninao amim-pahavitrihana izany miaraka amin'ny fo falifaly satria hoentinao hanamaivanana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreninao, dia ho fitahiana ao an-tokantrano ianao. Tsy fantatrao ny halehiben'ny soa ataonao rehefa hita soritra eny aminao mandrakariva ny endrika falifaly sy miramirana mbamin'ny toe-tsaina vonon-kanampy (...) Manorina ny fiainana mandrakizay isan'andro ianao amin'izany. Tefeo hifanaraka amin'ilay Môdely avy any an-danitra ny toetranao. Ampiaraho amin'izany ny fahatsaram-panahy, ny fankatoavana voahevitra, ny fiheverana fatratra, ary ny fitiavana rehetra azonao atosaka (...) Mikolokoloa toetra malaky mangora-po; manàna endrika falifaly sy feno tsiky ary vonona ny hanome tànana izay mila ny fanampianao (...) Horaisiny [Andriamanitra] an-tsoratra avokoa ary tsy misy diso ny asa rehetra natao ho voninahiny (...) Handray valisoa be voninahitra ianao amin'ilay andro Iehiben'ny fifaranan'ny tantaran'ny tany. — Y1, 24 Septambra 1884,